(L) မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောစားနပ်ရိက္ခာစွဲလမ်းမှုများမည်သို့တူညီကြသည် (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု
Junk food များကိုမျို။ မရတော့ပါလား။
by: ဗစ်တိုးရီးယား Stern ပာ 04 / 29 / 10
အချို့လူများအနေဖြင့်အိတ်တစ်ခုမှချောကလက်မုတ်ဆိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချစ်ပ်တစ်ရွက်သာစားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်သုတေသနအသစ်အရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်စားသုံးလေလေ၊ သကြားဓာတ်ပိုမိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပြင်းထန်သော junk အစားအစာမတရားသောနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းတဦးတည်းထင်စေခြင်းငှါ, ထက် ပို. အလားတူဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။
ဖလော်ရီဒါအတွက် Scripps Research Institute မှသုတေသီများက compulsive ကျော်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအဖြစ်အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်တူညီတဲ့အပြောင်းအလဲများအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့ကြသည်။
Scripps သုတေသနအင်စတီကျုမှမော်လီကျူးကုထုံးပညာပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်သူ ဦး ဆောင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာစာရေးဆရာပေါလ်ကဲနီက“ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကကျွန်ုပ်တို့နဲ့တခြားသူတွေသံသယဖြစ်တာကို - အတည်ပြုပြီးတဲ့အစားအစာက ဦး နှောက်ထဲမှာစွဲလမ်းမှုနဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေတယ်၊
အစားအစာစွဲလမ်းမှု၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် Kenny နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Paul Johnson ကကြွက်များ၏အစာစားခြင်းအပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သုတေသီများကကြွက်များကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲလိုက်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုသည်ပုံမှန်အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာကိုရရှိသည်။ ဒုတိယအုပ်စုသည်အဆီ၊ ကယ်လိုရီမြင့်မားသောအစားအစာများဖြစ်သောလူသားများဖြစ်သောဘေကွန်နှင့်ဒိန်ခဲစသည့်အစားအစာများကိုရရှိခဲ့သည်။ တတိယအုပ်စုသည်အများအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီအကန့်အသတ်မရှိသောအစားအစာများမှအပကျန်အများအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကောင်းသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် တစ်နေ့လုံးအညစ်အကြေးများနှင့်ထိတွေ့နေသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ကြမ်းတမ်းသောအစားအသောက်များကိုစားသုံးသည့်ကြွက်များထက်ကယ်လိုရီနှစ်ဆပိုမိုစားသုံးရပြီး၊ အဆိုပါကန်သူသည်အဝလွန်ကြွက်များသည်အဲလိုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကြွက်များ၏ခြေထောက်အထိလျှပ်စစ်ထိတ်လန့်စေနိုင်သည့်တိုင်အောင်အဝလွန်ကြွက်များကိုအဆက်မပြတ်စားသုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။
junk အစားအစာမှကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်တ-နာရီ junk အစားအစာ window တွင်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကယ်လိုရီစားသုံး, Bing စားဖြစ်လာခဲ့သည်။
သို့သော်ဤကြွက်ကြောင်းအဝလွန်ခြင်းကိုညွှန်း, အဝလွန်ဖြစ်လာဘူးအစာစားခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော, မမူးရူးနှင့်အတူပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ, Kenny ကဖော်ပြသည်။
သူတို့ကမူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသခဲ့ပြီးသော dopamine ကိုခေါ်, တစ်ဦးနှောက်အဲဒီ receptor အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အဲဒီ receptor binding dopamine, လိင်, ဒါမှမဟုတ်အစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်တူသောပျြောမှေ့စအတွေ့အကြုံ, စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာဖြန့်ချိမယ့်ဓာတုခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သုတေသီများသည်တွေ့ရှိရသောအညစ်အကြေးများကိုစားသုံးခြင်းသည် ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine များပြားစေသည်။ ကြွက်၏ပျော်ရွှင်မှုစင်တာသည် dopamine နှင့်အလွန်အမင်းတိုးပွားလာသောအခါ ဦး နှောက်သည် receptors များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်စတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဤအပျော်တမ်းစင်တာများသည်တုန့်ပြန်မှုနည်းလာသည်နှင့်အမျှကြွက်သည်အလျင်အမြန်အစာရှောင်ခြင်းဖြင့်အဝလွန်ခြင်းသို့မရောက်မှီအများသောအစားအစာများစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
အဆိုပါသုတေသီများလည်းနည်းပါးလာ receptors ရှိသည်အချို့ကြွက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်သူတို့ကိုန့်အသတ်ရှိတဲ့ Junk အစားအစာကျွေးမွေး၏။ ဘင်ဂိုကစား! အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များနီးပါးနေ့ချင်းညချင်း compulsive overeaters ဖြစ်လာခဲ့သည်။
"ဒါကအနည်ထိုင်နှုန်းနည်းပါးတဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာအစားအသောက်နဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲသူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်" လို့ Kenny ကဆိုပါတယ်။
အဖွဲ့အစားအသောက်စွဲလမ်းကိုထိန်းချုပ်ရန်တစ်လမ်းထွက်နေသေးတယ်မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့, Kenny ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်စွဲလမ်းနားလည်သဘောပေါက်အဝလွန်များအတွက်ကုသမှုရွေးချယ်စရာ generate ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။